7w 15w 25w 35w 50w I-elephant trunk ekhanyise ukukhanya kwe-LED,Ukukhanya Kwe Led,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - KwiChina 7w 15w 25w 35w 50w I-elephant trunk ekhanyise ukukhanya kwe-LED, Umvelisi noMboneleli
7w 15w 25w 35w 50w I-elephant trunk ekhanyise ukukhanya kwe-LED. Ukukhanya kwethu okukhanyayo okanye ukukhanya (kunye nokukhanya kwebhodlela kwiCanada yesiNgesi, ngamanye amaxesha kunokukhanya (ukukhanya kogcino) kwisiNgesi saseMerika) yindlela yokukhanya efakwe kwisithuba esingenalutho kwisiqwenga. Xa ukufakela kubonakala ngathi kukhanya kukhanya ukusuka emgodini kwiplanga, kugxininisa ukukhanya kwisikhokelo esingaphantsi njengesikhanyiso esiphezulu okanye ibala elincinci. Uluhlu lwempembelelo ye-LED esebenzayo yamandla, izibane zokukhanya kwe-LED ezinika ukubukeka nokuvakalelwa kwanamhlanje. Ukukhanya kuloluhlu kunamandla okomelela ngamandla kunye nexesha elide lokuphila, okuvumela ukugcinwa okukhulu kweebhilikhwe zamandla kunye neendleko zezibane ezitshintshileyo ngelixa zibonelela ngokukhanya okuphezulu. Ukukhokelwa kwethu kunye nokudonga ukukhanya kuboniswa bonke.( 7w 15w 25w 35w 50w I-elephant trunk ekhanyise ukukhanya kwe-LED )
7w 15w 25w 35w 50w I-elephant trunk ekhanyise ukukhanya kwe-LED